Libby, ngwa ọhụrụ Overdrive dị ugbu a maka ụfọdụ | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Libby, ngwa ọhụrụ Overdrive dị ugbu a maka ụfọdụ
Fewbọchị ole na ole gara aga, ụlọ akwụkwọ overDrive ndị ọrụ gosipụtara ma kuzie ngwa ngwa ọrụ Overdrive ọhụrụ nke ga-adị n'oge na-adịghị anya. A ga-akpọ ngwa a Libby y Ọ gaghị abụ ngwa ga-eji dochie ngwa ọrụ Overdrive maka oge ahụ kama ọ ga-abụ mmeju maka ndị ọrụ Overdrive.
Ọrụ nke Libby dị mfe ma naanị anyị kwesịrị igosi aha ọbá akwụkwọ ahụ wee tinye nọmba ndị otu, mgbe ahụ anyị abanye paswọọdụ na ọ bụ ya.
Agbanyeghị Libby amalitela iguzo site na ndị na-anọghị ya na ọ bụghị maka omume ọma ya. N'etiti enweghị ndị a, nke kachasị dị egwu bụ enweghị obi ike na akwụkwọ ọgụgụ na onye na-agụ Libby. Nke a megidere ụkpụrụ na ụkpụrụ nke nnweta maka dọkụmentị.
Libby anaghị asọpụrụ ụkpụrụ ịnweta ụwa n'oge a
N'aka nke ọzọ, ngwa ngwa Overdrive yana Kobo nwere ọrụ a, ihe na-adọta mmasị ndị ọzọ. N'aka nke ọzọ, anyị maara nke ahụ Libby dakọtara na sọftụwia Kobo eReaders, nke ga - enyere gị aka izigara eRead akwụkwọ ntanetị ozugbo na enweghị kọmputa. Akụkụ nke ewepụtara ogologo oge gara aga mana enwere ezigbo nsogbu ọrụ.
Anyị amaghị ihe ọ bụla gbasara ọdịnihu Libby, mana ọ bụ ezie na ọ ka na-emepe, eziokwu bụ na ọ dị ka ọ dị ga-abụ otu onye ahịa nke ọrụ Overdrive nke ga-enye gị ohere ijikọ na nyiwe ekwentị ndị ọzọ na eReaders. Ihe na-adọrọ mmasị ọtụtụ. O nwekwara ike ịbụ onye ahịa maka ụlọ akwụkwọ ọbá akwụkwọ na-eji Overdrive na ọrụ ndị ọzọ nke abụọ.
Ka o sina dị, Libby ga adi maka iOS na gam akporo, yabụ anyị nwekwara ike ịwụnye ngwa a na mkpanaka anyị ma ọ bụ mbadamba ma ọ bụ jiri ya dịka onye na-agụ ebook mgbe niile. A ka nwere ụzọ dị anya ị ga-aga maka Libby ka ọ bụrụ onye asọmpi siri ike maka ngwa ndị ọzọ dịka Kindle Reader, Kobo ma ọ bụ Aldiko mana ọ dị ka ọ na-adọta ọtụtụ anya, ị cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » ụlọ ọrụ » Kobo » Libby, ngwa ọhụrụ Overdrive dị ugbu a maka ụfọdụ
Ndewo Joaquín Overdrive ọ dị na ọba akwụkwọ na Spain?
JK Rowling na-ekpughe na o nwere akwụkwọ ọhụrụ n'ụzọ
Ihe ọhụrụ Nook Mbadamba ụrọ 7 na-abịa na malware n'ime [emelitere]